बैंकिङ सेवा कुन कुन शाखाबाट संचालन हुन्छ ? फोनबाटै सहयोग लिन सकिन्छ ~ Banking Khabar
बैंकिङ सेवा कुन कुन शाखाबाट संचालन हुन्छ ? फोनबाटै सहयोग लिन सकिन्छ
बैंकिङ खबर । लकडाउनको अबस्थामा पनि बैंकहरुले विभिन्न तरीकाले सेवा सुचारु गरेका छन् । यसमध्ये लकडाउनको समयमा डिजिटल सेवा सहज हुन सक्छ । बैंकहरुले एटीएम कार्डमा समस्या आए वा कुनै जानकारी आबश्यक परे टेलिफोनबाटै सहजीकरण गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि तपाईले आफ्नो खाता भएको बैंकलाई टेलिफोन गरेर समस्या राख्न र समाधान खोज्न सक्नुहुन्छ ।
डिजिटल कारोबारमा फोकस
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीबाट काम गर्न अनुरोध गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले कोरोना संक्रमणबाट जोजिनका लागि डिजिटल भुक्तानीलाई सहज गराएको छ । राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाउनुका साथै परिपत्र मार्फत मोबाइल वालेटको माध्यमबाट गरिने बैंकिङ कारोबारको सीमा बढाएको छ । जसअनुसार मोवाइल बैंकिङबाट दैनिक १ लाख र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँ कारोबार गर्न मिल्ने बनाइएको छ । यसअघि दैनिक २५ हजार र प्रतिमहिना २ लाखको सिमा तोकिएको थियो । राष्ट्र बैंकले मोवाइल वालेट अन्तरगत एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकम ट्रान्सफरको सीमा पनि बढाएको छ । यसअघिको प्रतिदिन २५ हजार र प्रतिमहिना ५० हजारको सिमा बढाएर प्रतिदिन ५० हजार र प्रतिमहिना ५ लाख सम्म कारोबार गर्न सकिने बनाइएको छ ।
डिजिटल बैंकिङ सिक्ने अबसर
अहिले डिजिटल बैंकिङको प्रयोग बढाउनुपर्ने र सिक्ने बेला पनि हो । जसका लागि एटीएम कार्ड, मोवाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र मोवाइल वालेट प्रभावकारी हुन सक्छन् । बैंकले सिमित शाखा मात्रै संचालन गर्दछन् । त्यसमाथि लकडाउनका बेला बैंकको खुलेको शाखासम्म जान कम्ति दुख छैन । बैंकले अति सिमित शाखा खोल्नेछन् । केही शाखा खुल्ला गरेपनि फिजिकल खोर्कआउट सहज हुने छैन । यस कारण पनि डिजिटल बैंकिङको प्रयोग अहिले अति उत्तम देखिएको छ । लकडाउनको समस्यासँगै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने जोखिम बढेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पहिले नै ग्राहकलाई विद्युतीय कारोबार गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । इन्टरनेट तथा मोबाइल लगायत विभिन्न विद्युतीय माध्यमवाट गरिने कारोबार निशुल्क उपलब्ध छन् । यसैगरी कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्ड नेपालभित्र अन्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे एटिएममा प्रयोग गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने ब्यबस्था गरिएको छ । साथै नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले प्रदान गर्ने कनेक्ट आईपीएस सेवा निशुल्क भएको छ ।
डिजिटल बैंकिङका फाइदैफाइदा